Guryaha la isku halleyn karo ee ku sii fidaya jiilalka
City of Lakes Community Land Trust wuxuu abuuraa fursado guri oo la awoodi karo adoo iibsanaya dhulka oo ka saaraaya suuq-geynta hantida maguuraanka ah. Dakhliyada uqalma dakhliga u qalma ayaa markaa ka iibsan kara guri ku yaal dhulka, kiraynaya dhulka ilaa 99 sano oo ah heshiiska kireysiga dhulka dib loo cusbooneysiin karo. Tani waxay xaqiijineysaa haddii iyo haddii milkiilaha gurigu uu go'aansado inuu iibiyo, Land Trust wuxuu haysan karaa guriga oo la awoodi karo qoysaska kale ee dakhliga leh, oo abuuraya guryo si joogto ah loo awoodi karo.
Mamo Jale iyo Safiya Sani waxay ka soo qaxeen Itoobiya sida qaxooti siyaasadeed, oo markii hore degganaayeen Kenya. Intii lagu guda jiray shanta sanno ee ay joogeen Kenya, waxay ku riyoodeen inay u guuraan Mareykanka, ugu dambeynna dib loogu dajiyo Minneapolis qeyb ahaan sababtuna waa weyn Oromo dadka horay u deggenaa.
Iyadoo la kafaala qaadayo Machadka Caalamiga ah ee Minnesota, Mamo iyo Safiya waxay barteen Ingriiska, waxay heleen tababar xirfadeed, waxayna heleen shaqo. Si kastaba ha ahaatee, guri-guri, si kastaba ha ahaatee, waxay ku jabiyeen lix sano. Markaad ka timid waddan ay ku leeyihiin guri iyo sidoo kale ganacsi yar, Mamo iyo Safiya waxay ka niyad-jabeen fikradda kireysiga muddo dheer. Laakiin waxay ka gaabsadeen inay dabagalaan mulkiilayaasha guryaha sababtoo ah wax aan la aqoon oo ku saabsan codsiga dhismaha ee Maraykanka. Waxay ahayd waqtigan Mamo iyo Safiya waxay barteen Magaalada Lakes Community Community Trust oo ka timid saaxiibkii Oromo, kuwaas oo horey u ahaa mulkiilaha guriga.
Safiya waxa ay sheegtay in gargaarka ka yimid City of Lakes Community Land Trust ee ku saabsan hannaanka geeddi-socodka uu ahaa mid qiimo leh. "Itoobiya oo dhan dhismayaasha waa la taaban karo. Wakhti dheer ayay qaadanayaan. Ma aanan ogeyn dhibaatada biyaha ama dhibaatooyinka dhismaha. Waxaa jira waxyaabo badan oo la ogaado. "
Safiya waxa ay sheegtay in gargaarka ka yimid City of Lakes Community Land Trust ee ku saabsan hannaanka geeddi-socodka uu ahaa mid qiimo leh. "Itoobiya, dhismayaasha oo dhan waa kuwo la taaban karo. Wakhti dheer ayay qaadanayaan. Ma aanan ogeyn dhibaatada biyaha ama dhibaatooyinka dhismaha. Waxaa jira waxyaabo badan oo la ogaado. "
Kadib baaritaan qoto dheer oo ku dhowaad 30 guri, Mamo iyo Safiya waxay awoodeen inay iibsadaan guri cusub, oo loogu talagalay xaafadda Heritage Park ee Waqooyiga Minneapolis. Safiya waxay dib u eegaysaa sida ay uga faa'iideysaneyso taageerada ay ka heshay Land Trust oo ay ku sheegtay in hay'addu ay kula talisay go'aanka iibsashada guriga iyo sidoo kale waxa la sameeyo haddii ay wax dhacaan oo ay guriga ku dhacaan oo aanay awoodi karin inay iskood maareyn karaan.